FITORIANA MOMBA NY FIFIDIANANA :: Nanaraka ny efa voalazan’ny HCC fotsiny ihany ny Filankevi-panjakana • AoRaha
FITORIANA MOMBA NY FIFIDIANANA Nanaraka ny efa voalazan’ny HCC fotsiny ihany ny Filankevi-panjakana
Tsy nisy ny fahagagana. Nivalampatra manontolo tamin’ny fanazavana momba fahefana omen’ny Lalàm-panorenana an’ireo mpi- kambana eo anivon’ny Filankevi-panjakana ny raharaham-pitsarana mikasika ny fitoriana napetraky ny kandidà Randriamanantsoa Tabera sy Ralaiseheno Guy Maxime, mitaky ny fampi- atoana ny didim-panjakana miantso an’ireo mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana filoham-pirenena hotontosaina amin’ny 7 novambra 2018 ho avy izao.
Adim-pamantaranandro maromaro no lany vao namoaka ny fanapahan-keviny milaza ny tsy fahafahan’ izy ireo mitsara an’ity raha- raha ity ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Nolavina, araka izany, ny fitoriana ary notsindriana tao anatin’ny valin-teny nataon’ireo mpikambana eo anivon’ ny Filankevi-panjakana ny tsy fananan’izy ireo fahefana hitsara ny raharaha.
Tsy naka sarotra fa nanaraka ny fehin-kevitra navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) fotsiny ihany ireo mpitsara ao amin’ny Filankevi- panjakana. Ireo mpikamban’ ny HCC, izay efa namoaka fehin-kevitra nilaza fa izy ireo ihany no nomen’ny Lalàm-panorenana fahefana hitsara ny raharaham-pifidianana.
Pilo kely • Raharaham-pirenena • Uncategorized
Pilo Kely arson’i Mamy Be
Antenimierampirenena Norombahin’ny IRD indray ireo toerana filoha lefitra
Fandraisana ny Papa Francois Paroasy dimy no handray ireo vahiny avy any amin’ny faritra
FITRANDRAHANA ANGOVO AZO HAVAOZINA :: Hanao loa-bary an-dasy ny vondron’ireo mpandraharaha
Hanamarina ny asany